Kindle Oasis VS Kindle Voyage, eReaders abụọ kachasị mma na ahịa ihu na ihu | Ndị niile na-agụ akwụkwọ
Kindle Oasis VS Kindle Voyage, eReaders abụọ kachasị mma na ahịa ihu na ihu
Villamandos | | Amazon unu si n'ihe unu, ndị na-agụ akwụkwọ
Naanị ụnyaahụ Amazon kwadoro ihe ọhụrụ Kindle Oasis e-agụ akwụkwọ na ...Ọdịdị Omenala»/], eReader ohuru di elu nke puru iche maka imeziwanye ya, n’ihe banyere onye bu ya ụzọ, ndị Egwuregwu njem e-agụ, ...Obi iru ala»/] Na maka idobe atụmatụ ndị enyere site na Kindle gara aga, nke bụ ọkwa nke ụlọ ọrụ Jeff Bezos duziri. Mgbe anyị nyochachara ya ụnyaahụ, mgbe anyị nwesịrị ya ịnwale nkeji ole na ole na mmemme nke Amazon Spain kpọrọ anyị, taa, anyị enweghị ike ịhapụ ohere iji chee ya na onye bu ya ụzọ ihu ma jiri ya tụnyere Kindle Paperwhite -...Kindle Paperwhite »/], nke anyị nwere ike ịsị bụ nwanne ya nwoke.
Taa na site na edemede a Anyị ga-atụle nke ọma Kindle Oasis na Kindle Voyage, na-echefughi ka anyị kwurula banyere Kindle Paperwhite. Ikekwe ọdịiche dị iche iche adịchaghị, mana ha dị mkpa na ọ bụ ezie na ileba anya mbụ ha yiri ngwaọrụ atọ yiri nke ahụ na ndabere ha dị ezigbo iche, na-amalite site na imewe ha ma kwụsị na ọnụahịa ha.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịma etu Ogba Okike ọhụrụ, indzọ njem na Kindle Paperwhite si yie, jiri nwayọ gụọ maka na site n’isiokwu a ị ga-achọpụta, ọ bụghị naanị nke ahụ, kamakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ, nke anyị kwenyere na ị nwere ike ị masịrị gị. ọ bụrụ na ị na-eche, dịka ọmụmaatụ, ịzụta eReader ọhụrụ, ịbanye ụwa nke ọgụgụ dijitalụ ma ọ bụ ịgbanwe ngwaọrụ ị nwere ugbu a.
Tupu anyị atụnyere ihuenyo ya, ọnụahịa ya ma ọ bụ uru ya n'akụkụ dị iche iche, anyị ga-eme nyocha zuru ezu banyere njirimara ya na nkọwapụta ya, ka anyị niile wee chọta onwe anyị ma mata nke ọma ihe ọ bụla n'ime Kindle a na-enye anyị.
1 Atụmatụ njem na-enweghị atụ
2 Atụmatụ na nkọwa doro anya nke Oasis
3 Akụkụ Kindle Paperwhite na nkọwa
4 Kere; otu nzọụkwụ azụ iji nọgide na-emeziwanye
5 Ihuenyo; achọla ha maka na ọdịghị ọdịiche dị
6 Ihe omuma nke Oasis ohuru, odi nkpa ma zuo oke dika ihe ohuru?
7 Ọnụahịa ahụ; nnukwu ihe di iche
8 The Kidle Oasis, onye mmeri nke duel a n’enweghị ọtụtụ arụmụka
Egwuregwu njem e-agụ, ...
Ihe ngosi dị elu dpi 300 dpi: gụrụ dị ka mpempe akwụkwọ, na-enweghị ntanye, ọbụlagodi na ìhè anyanwụ na-enwu gbaa.
Ijikwa ọkụ ihu igwe nke na - enye ogo dị mma maka ehihie na abalị; gụọ nke ọma ruo ọtụtụ awa.
Peeji nke Peeji na-enye gị ohere igbanwe peeji nke n’ebughi mkpịsị aka gị.
Guo dika ichoro. Na otu ụgwọ, batrị na-adịgide ruo ọtụtụ izu, ọ bụghị ọtụtụ awa.
Sara mbara katalọgụ nke eBooks na ala ahịa: karịa 100 eBooks na Spanish na a price na-erughị € 000.
Kindle Oasis e-agụ akwụkwọ na ...
Anyị thinnest na lightest Kindle; gụọ nke ọma ruo ọtụtụ awa.
Ergonomic bọtịnụ imewe maka ịgbanwere ihu peeji.
Obiọma nwere nnwere onwe ka ukwuu. Akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ nwere batrị agbakwunyere nwere ike ịgbatị ndụ batrị nke ngwaọrụ ahụ ọtụtụ ọnwa.
Họrọ agba nke mkpuchi mbughari: nwa, burgundy ma ọ bụ ukpa.
300 dpi ngosipụta dị elu - na-agụ dị ka akwụkwọ ebipụtara.
Akụkụ Kindle Paperwhite na nkọwa
Display: webatara a 6-anụ ọhịa ihuenyo na Letter e-akwụkwọ technology na ike ịgụ ọkụ, 300 dpi, kachasị font technology na 16 isi awọ akpịrịkpa
Akụkụ: 169 x 117 x 9.1 mm
Arọ: WiFi ụdị 205 gram na 217 grams WiFi + 3G mbipute
Battery: Amazon na-achota na iji otu ụgwọ nke ngwaọrụ anyị nwere ike ịnụ ụtọ ịgụ maka izu 6.
-Na-achịkwa onwe ya n’ime ìhè: ọ na-agụ ehihie na abalị.
Kporie agụụ gị maka ịgụ akwụkwọ na-enweghị mkpọsa ma ọ bụ ọkwa email.
Kere; otu nzọụkwụ azụ iji nọgide na-emeziwanye
Site na mbata nke ahịa n'afọ gara aga nke Kindle Voyage, Amazon chọrọ ịnye anyị ngwaọrụ nwere oke ike, nkọwa na-atọ ụtọ, mana karịa ihe niile nwere atụmatụ adịchaghị ma jupụta n'ịdị mma. Ejiri ihe dị elu, naanị site na ijide ya n'aka gị ị nwere ike ịchọpụta na ịnọghị n'ihu ngwaọrụ ọ bụla.
Otú ọ dị, Mgbe ọbịbịa nke Kindle Oasis dị n'ahịa, ụlọ ọrụ nke Jeff Bezos duziri yiri ka ha kpebiri ịlaghachi azụ, iji gaa n'akụkụ ọzọ., nke doro anya n'ihi na ihe na-akpali. N'ime ụdị ọhụụ a, plastik dị elu bụ onye ọzọ bụ isi, iji nwee ike ịnye anyị ngwaọrụ nke obere akụkụ yana karịa ihe niile dị ala.
Tụkwasị na nke ahụ, plastik nke e ji wuo Kindle ọhụrụ a emebeghị ka anyị nwee mmetụta na-adịghị mma ma na-ebelata ịdị arọ dị ukwuu. Dịka ị hụburu, anyị esila na gram 188 nke Kindle Voyage dị naanị gram 131 nke New Kindle Oasis dị.
Ntinye nke ikpe ahụ, nke nwere batrị etinyere, bụ otu n'ime ike nke Kindle Oasis, bụ nke a na-ejighị ihe ndị dị elu ejiri mee njem na Kindle Voyage, mana nke edochi iji nye anyị ọtụtụ ihe ndị ọzọ, nke ọzọ na-akpali, ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ anyị na-eche otú ahụ.
Banyere imewe, anyị nwere ike ikwu nke ahụ Kindle Paperwhite nwere otu nzọụkwụ n'azụ ma Okun Kindle na Kindle Voyage, ọ bụ ezie na ọ dabara nke ọma ọtụtụ ndị na-agụ anaghị eche banyere mpụga nke ngwaọrụ ahụ na ihe dị ezigbo mkpa bụ njirimara ndị ọ na-enye ha n'ime.
Ihuenyo; achọla ha maka na ọdịghị ọdịiche dị
Ọ bụrụ na anyị tinye Kindle atọ na tebụl wee gbanye ha, na ihuenyo ya, anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ myirịta na obere esemokwu. Ma ọ bụ na ngebichi nke Kindle Oasis, Kindle Voyage na Kindle Paperwhite bụ otu nha, jiri otu teknụzụ ma nwee otu mkpebi nke pikselụ kwa inch.
Otu n'ime esemokwu dị iche iche anyị ga-ahụ bụ ikekwe nchapụta anyị na ọ bụ na Kindle Oasis erutela n'ahịa na-etu ọnụ na-enye anyị nnukwu ihie, ọbụlagodi n'ọnọdụ ọnọdụ dị ala. Akụkụ a dị iche iche na-efunahụ mkpa ọ dị ịmara na ngwaọrụ atọ ahụ nwere ọkụ na-eme ka anyị nwee ike ịgụ, na-enweghị nsogbu ọ bụla ma na-ahapụghị anya anyị na ịnwale, n'ọnọdụ ọchịchịrị zuru oke.
Obi abụọ adịghị ya, ihuenyo ahụ agaghị abụ otu n'ime esemokwu ndị na-eme ka anyị nwee ike ịzụta otu ma ọ bụ ngwaọrụ ọzọ na nke ahụ bụ na mmadụ atọ ahụ niile yiri nnọọ ma dị iche na obere nkọwa na-enweghị oke mkpa.
Ihe omuma nke Oasis ohuru, odi nkpa ma zuo oke dika ihe ohuru?
Ruo ụbọchị, a nụrịrị na ọ ga-ekwe omume ọhụrụ Kindle ga-etinye ikpe ebe batrị mpụga bụ isi protagonist. Anyị nwere ike ịsị na okwu a bụ otu nnukwu ọdịiche dị iche iche nke Kindle Oasis ọhụrụ gbasara Kindloe Voyage yana n'ozuzu gbasara ihe ọ bụla eReader nwere akara Amazon.
Dabere na mkpa onye ọrụ ọ bụla, ọ nwere ike ịbụ ezigbo ngọzi, ọ bụ ezie na m na-atụ ụjọ na ndị ọrụ ole na ole ga-erite uru na ya na nke ahụ bụ na batrị eReader enyelarị anyị nnwere onwe dị ukwuu ma ekwenyere m na ọ dịghị mkpa maka nke a ọhụrụ Kindle, ma ọ bụ zuru oke ka ọ bụrụ nnukwu onyeiche dị iche iche gbasara onye bu ya ụzọ.
Na mgbakwunye, anyị agaghị echefu na ụdị ọhụụ a na-enye anyị ụgwọ ngwa ngwa, nke na-enye ohere ịgba batrị ngwaọrụ ahụ na obere oge. Ọ nwere onye ọ bụla nwere ezi uche na eReader na ikpe nwere batrị arụnyere?.
Ọnụahịa ahụ; nnukwu ihe di iche
El Obi iru ala Ọ bịarutere n'ahịa ahụ na ọnụahịa nke juru ihe karịrị otu anya, ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime anyị nwere eReaders dị ka ngwaọrụ nwere ọnụahịa dị ala ma ọ bụ obere karịa na iru onye ọrụ ọ bụla. Amazon kwadoro ya site n'ikwu na anyị na-eche ihu akwụkwọ eletrik dị elu, nke ihe adịchaghị mkpa na ọ na-enye anyị atụmatụ na arụmọrụ nke anyị na-enweghị ike ịnwe na ngwaọrụ ọzọ nke ụdị a. Ugbu a Enwere ike ịzụta ngwaọrụ a maka euro 189.99.
Companylọ ọrụ nke Jeff Bezos duziri nọgidere na-edebe na katalọgụ ya Basic Kindle na Kindle Paperwhite, nke enwere ike zụta maka 79.99 euro na 129.99 euro n'otu n'otu.
Mwepụta nke Kindle Voyage adịghị njọ maka nnukwu ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na n'agbanyeghị nsogbu nsogbu mbụ, ahịa gbanwere ọnụ ọgụgụ dị mma. Na Ọdịdị Omenala Ọ pụtara ịga n'ihu n'ihu na nke ahụ bụ na ọnụahịa ya ka dị elu karịa nke Kindle Voyage, na-enweghị, dịka anyị hụworo, na-enye anyị ọtụtụ akwụkwọ ọhụụ. Ugbu a ngwaọrụ a nwere ike zụrụ n'ahịa maka euro 289.99, ọnụ ahịa na-akwụ ụgwọ nke ukwuu maka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọrụ na-adịghịdị atụle ohere nke imefu ego bụ ego na akwụkwọ elektrọnik, nke ha nwere ike iji mee ka ịgụ akwụkwọ ọnụọgụ na-atọ ụtọ.
Ihe dị iche n'etiti ọnụahịa atọ dị ezigbo mkpa ma taa o siri ike ịchọta ọtụtụ ndị ọrụ dị njikere itinye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 300 euro na eReader. N'ezie, ime nke a, anyị ga-enwe Obi withtọ na njiri mara oke mma yana njiri mara na nkọwa.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ itinye obere ego, maka euro 129.99 nke Kindle Paperwhite bara uru, anyị ga-enwe Kindle mara mma nke ga-eme ka anyị nwee ọ toụ ọgụgụ dijitalụ, nke bụ ihe mgbaru ọsọ na ịzụta eReader. Anyị nwere ike ịsị na imewe ahụ bụ nke abụọ.
Ihe dị iche na ọnụahịa dị elu; Ọ dị ukwuu nke ukwuu n'ihe gbasara nhazi na ịrụ ọrụ iji kwụọ ụgwọ ahụ?.
The Kidle Oasis, onye mmeri nke duel a n’enweghị ọtụtụ arụmụka
Ọ bụ eziokwu na Amazon jisiri ike mee ka Kindle Oasis nwee nnukwu ibu na atụmatụ ka mma, na-etinye okwu ọhụrụ nke na-enye anyị mgbakwunye batrị, mana ọ bụ ebe anyị nwere ike ịsị na akụkọ ahụ erutela. Ọ bụrụ na Kindle Voyage bụ ụdị nke 1.0 nke ngwaọrụ, nke a Kindle Oasis Echere m na ọ nwere ike ịbụ 1.2 n'enweghị nsogbu, mgbe anyị niile tụrụ anya na ọ ga-abụ 2.0 na akụkọ dị mkpa.
Oasis ọhụrụ nke Kindle bụ onye mmeri nke duel a ruo atọ, ọ bụ ezie na enweghị ọtụtụ arụmụka na ọnụahịa nke gbasoro site na ihe ọ bụla karịa ihe ọ bụla na-erughị 100 euro ma e jiri ya tụnyere Kindle Travel. Anyị niile tụrụ anya ọtụtụ ihe site na Ọdịdị ọhụrụ ahụ nakwa na ọ ga-etinye atụmatụ ọhụrụ na ọ bụghị naanị ikpe na batrị etinyere. Okwu a nwere ike ịba uru na smartphone nke ndụ batrị ya dị mkpụmkpụ, mana na eReader nke batrị ya nwere ike ịdịru ọtụtụ izu, n'eziokwu, anaghị m ahụ mgbagha ma ọ bụ uru ọ bara.
N'ime duel siri ike onye mmeri ga-abụ Kindle Oasis dị ka anyị kwuru, mana ọ bụrụ na anyị lelee ọnụahịa ahụ ma leba anya n'ihe anyị chọrọ na eReader, ikekwe ọzọ onye mmeri ga-abụ Kindle Paperwhite, Kindle kachasị edozi na akụkọ ntolite site na ọnụahịa dị egwu pụrụ iche.
Kedu onye mmeri nke duel dị n'etiti Kindle Oasis ọhụrụ, Kindle Voyage na Kindle Paperwhite maka gị?. You nwere ike ịgwa anyị echiche gị na oghere edebere maka ikwu na post a, na ọgbakọ anyị ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta ọ bụla anyị nọ ma dị njikere isoro gị kwurịta nke a ma ọ bụ isiokwu ọ bụla ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndị niile na-agụ akwụkwọ » Hardware » ndị na-agụ akwụkwọ » Kindle Oasis VS Kindle Voyage, eReaders abụọ kachasị mma na ahịa ihu na ihu
Enwere m nkụda mmụọ, na-eche ogologo oge ka a sụgharịa njedebe na mgbanwe mgbanwe dị mfe, n'echiche m na ọ dịghị adọrọ mmasị dị ka njem.
ọnụahịa ahụ yiri m nzuzu.
enweghị nhazi ọhụụ, enweghị ihu igwe kwalite, enweghị agba agba, wdg.
Anyị ka nọ na-emepechabeghị anya nke ndị na - agụ akwụkwọ, ụlọ ọrụ ọ bụla enwere ike ịnwe ihe a ga - eme na Renaissance na Modernity?
Ebee ka imx7 onye ama ama ama zoro ezo, ebe ihuenyo na agba, ọbụlagodi na agbanyụrụ ha, ebe a na-ebubo ya site na ike anyanwụ, ...
n 'ikike a ga - esi n'aka ụlọ ọrụ ọzọ, ọ bụghị site na amazon
anụ ọhịa dijo
Ọ ga-amasị m ịnwale Oasis. Eji m n’aka na ọ dị ezigbo mma ijide otu aka. Na nke ahụ, ana m ekele Amazon maka imepụta ngwaọrụ ahụ. Enwere m obi abụọ banyere etu ọ ga-esi dị mma ịpị bọtịnụ anụ ahụ, ọ doro anya na ọ dị mfe mana m ga-eche mgbe niile ihe kpatara na ọ nweghị onye imomiri obere wiil nke ochie Papyre 5.1 nwere. Ahụtụbeghị m ihe ga-eme ka m nwee ike ịtụgharị ihu na peeji nke ijiri ngwaọrụ n'aka.
Ọnụahịa ahụ were m iwe. Ọ dị oke ọnụ. Echere m na eziokwu nke gụnyere mkpuchi nwere ihe (ọtụtụ) ime ya. Ajụjụ bụ, gịnị kpatara ha ji etinye ya, si otú a na-ewelite ọnụ ahịa ngwaọrụ ahụ, kama ịnye ya iche iche dị ka ihe mgbakwunye? Anaghị m ejikarị ikpe n'ihi na ha na-eme ka ngwaọrụ ahụ bụrụ ihe jọrọ njọ (ọ bụghị na nke a, nke mara mma) ma ha na-abawanye ibu ahụ nke ukwuu ka m ghara ịghọta ebe a ihe kpatara Amazon ji kpebie itinye ya. Ihe kpatara ha ga-enwe.
Ọ dị ezigbo mma na mkpuchi ahụ na-enye nnwere onwe ọzọ mana echere m na ọganihu zuru oke ga-eme ụbọchị ha ga-etinye ọkụ ọkụ ọkụ nke aka ha ma mee ka ọ nweghị onwe ya na ọkụ eletrik. Site na ntakịrị ihe ndị na-ege ntị na-eri, echere m na ọ bụ ihe ga-ekwe omume. Echere m na ọ bụrụ na ha emeghị ya, ọ bụ n'ihi ụfọdụ imewe ma ọ bụ ibu ma ọ bụ na-eri nsogbu. Amaghi.
Dị ka ị na-ekwu n'isiokwu ahụ, ọdịiche ndị ahụ bụ: ọkụ ọkụ nke ngwaọrụ ahụ n'onwe ya, nwekwuo ikike (ya na mkpuchi), mkpuchi gụnyere, atụmatụ ka mma na ọkụ ka mma. O zuru ezu iji kwado ọnụọgụ ego? nke ahụ bụ ajụjụ.
N'oge a ka m na KP2 m "ochie" m dị.
Okwu nke Oindind Kindle na ikpe ahụ bụ na ọ dị ka ọ bụrụ na enweghị batrị nke ikpe ahụ, auntonomy nke Kindle anaghị agafe izu ole na ole. Nke a bụ n'ihi na Amazon tụkwasịrị obi n'eziokwu ahụ bụ na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị nwe otu n'ime ndị na-agụ akwụkwọ ozi e-e na-eburu ya mgbe niile.
Naanị, naanị n'etiti ha abụọ ga njem ahụ, n'ihi na anaghị m ahụ ezigbo mma ọ bụla na mmiri. Mana ọ bụrụ na m ga - ahọrọ onye mmeri, kobo h2o na - enweta mmeri site na ọdịda dị ka onye na - agụ akwụkwọ nwere arụmọrụ kacha mma na ahịa yana usoro ọgụgụ na nhazi kacha mma. Ọ bụ ezie na o nwere ụfọdụ dpi obere. Ọ bụrụ na ọ bụ ajụjụ nke DPis ma nọrọ na 6 "onye mmeri doro anya bụ kobo hd na-enweghị mkparịta ụka maka ogo ahịa.
Enwere m Kindle 7th na Kobo Glo HD na ọ dị nwute na m ga-ekwu na Glo adịchaghị mma ma e jiri ya tụnyere Kindle PaperWhite nke nwekwara 300 dpi.
Ọnụ oke oke na-enyeghị ọhụụ ọhụụ ọ bụla. Ọ bụ "ọzọ nke otu" ma ọ dị oke ọnụ. Mgbaghara zuru oke. Ọganihu ga-abịa n'otu aka na ogo nke ihuenyo ahụ. Eziokwu ahụ bụ na esemokwu esemokwu zuru oke yana akwụkwọ ozi ojii dị iche na nke edozichibeghị na-egosi n'ụzọ doro anya na enweghị mkpebi siri ike maka ihe ọhụụ. Dika onye kwuru; Anyị ka nọ na Middle Ages nke ndị eredaders.
Na-ekwenye na gị. Ekwuru m mgbe niile na Eink kwesịrị ịrụ ọrụ na nke ahụ, ọdịiche ahụ. Ndabere ọcha (nke zoro ezo ugbu a) na akwụkwọ ozi ojii. Echere m na ha ga-eweta teknụzụ ọhụrụ na ọnwa na-abịa ... iji hụ ozi ha na-eweta.
Onye mmeri abụghị njem ahụ ma ọ bụ ala mmiri. Ọ bụ akwụkwọ ọcha.
Achọghị m mkpuchi ma. Na ha na-ere ya akọrọ na anyị na-ekwu okwu. Agbanyeghị, ahụghị m mmelite karịa na mpempe akwụkwọ m.
O nweghi ma otu n’ime ha bu “ndi n’acho mma.” Ọ bụrụ na ihe ọ bụla, ha bụ Kindle kachasị mma, "elu nke elu ugwu", mana maka iji ya na Amazon. Eeh, amaara m, ana m emegharị ma gbanwee ... mana ... gịnị banyere Drm? Enweghị m ike ịnakwere dị ka nhọrọ dị mma "na ndabara" ihe bụ iwu na-akwadoghị. Ikwu Drm ekwesighi, ibu uzo, obu ihe ozo. Mgbe ọ bụla m nwere ike, m na-azụta na-enweghị Drm, ọ bụrụ na achọrọ m Kindle m ga-aga maka akwụkwọ ọcha ma ọ bụ ọbụlagodi nke kachasị na-enweghị ọkụ, ebe ọ bụ na ihe egwuregwu abụọ a na-efu ego dị oke ọnụ maka ebumnuche maka ebumnuche ha: ịgụ (nke eme nke Wonder na isi ma obu na Bq Cervantes, na onu ahia kariri nke oma).
Zaghachi Enric Renart
Daalụ maka edemede gị, ọ nyeere m aka nke ukwuu na nhọrọ
Zụta 'ochie' njem na 2017?
Ka m na-ekpebi ịzụta ọhụrụ Kindle, njem ahụ gburu m site na obere ihu ya na nyocha niile maka Oasis.
Ekwuru m akụkụ MINIMALIST na anaghị m ekwu na Oasis, site na nhazi na ịdị ọcha echiche Voyage bụ minimalism na e-agụ.
Ugbu a, ọ bụghị naanị nke ahụ. site na teknuzu echiche ya kariri ihe nile, o nwere ihe omuma karia onye obula. Igodo bọtịnụ bụ ihe mgbe ochie. Ọ bụ ihe gara aga. Ọ bụrụ na ọ bụ maka ịrụ ọrụ, ha bụ, naanị ị ga-agụsị akwụkwọ nrụgide ma jide mkpịsị aka gị wee pịa ka ị gbanwee peeji ahụ, yana nzaghachi dị ka Apple Watch.
Ha na-arụ ọrụ ahụ ma ọ pụta ìhè !!!
Ọ bụ imewe Jonathan Ive ga-eme. Bọtịnụ anaghị ahụ anya.
Na ihe !!!
Button ọlaọcha na carbon, ahụ magnesium na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie.
Dị mma, site na ibu ibu. Na mkpuchi ọ dị obere karịa. Na origami, nke ga - adị obere, mana ọ na - arụ ọrụ ma na - enye ndị Japan aka n’aka dum.
The ergonomics in theory of best of the oasis na-adabere na aka ị nwere, Oasis nwere ike bụrụ obere pere mpe n’agbanyeghi na iji azịza agbanwe agbanwe agbanwe ya, mana ọ na - amanye gị ka ị jiri otu aka na - agụ ya mgbe niile.
N'ọnọdụ ọ bụla ọ bụ uru kachasị mma maka njikọta akụkụ anọ nke Njem.
Iji mee ya nke ọma, m ga-ekwu na Njem ahụ bụ maka iji ya gafee osisi yana Oasis nwere ike ịka mma karịa ịgụ oge ụra.
Enwere ngwọta, zụta SUV Voyage, na Oasis iji gụọ n'ihe ndina (na-egwu egwu).
Ọ bụ ihe kachasị mma?
Kindle kachasị mma ga-abụ njem - ya na bọtịnụ ya a na - adịghị ahụ anya - yana nha na etu okike nke Oasis.
Okirikiri sekit anaghị etinye gị n'elu Voyage, ọ bụ ọdịmma ọdịnihu na njem oge gara aga.
Otu ihe ... ọkụ na-akpaghị aka bụ ihe na-atọ ụtọ nke kwesịrị ịdị na ngwaọrụ ọ bụla nke ọdịnihu.
Ihe 10 LEDs na nke 6 nke Voyage enweghị ihe dị iche, mkpesa efu banyere ọkụ yana akwụkwọ ọcha na-acha ọcha.
ICELỌ, njem na Origami bụ on 50 - dị ọnụ ala karịa. Yabụ na nke a abụghị nsogbu.
Oasis na teknụzụ njem bụ obere ihe ọzọ enwere ike ịka mma.
Kwuru ihe a niile site na nkwanye ùgwù 😉
Zaghachi Jerry Siegel
Daalụ maka edemede gị, ọ nyeere m aka nke ukwuu n'ịhọrọ.
Ọ dabere na aka ị nwere, Oasis nwere ike bụrụ obere pere mpe ọ bụ ezie na iji azịza a na-agbanwe agbanwe edozi ya, mana ọ na-amanye gị ịgụ otu aka mgbe niile.
Enwere ihe ngwọta, zụta Voyage SUV, na Oasis iji gụọ n'ihe ndina.
Aghaghị m ịzụta otu maka ụbọchị ọmụmụ site n'aka onye na-agụ akwụkwọ kachasị njọ, gịnị ka ị ga-akwado? Aghaghị m iyi m ezigbo mma
Kindle Oasis vs Kobo Aura H2O, nsogbu nke colossi?
Ihe mgbakwunye ọhụrụ na-agbakwunye ederede na okwu na Caliber